Kaayyoo fi Galiin Utubaa Jaarmiaa Ykn Dhaaba Tokkoo Ti | Oromo Freedom News and Views
“MATAA NU MARAA JIRUU !!!!!!!!!!!!!!!!!!” →
Kaayyoo fi Galiin Utubaa Jaarmiaa Ykn Dhaaba Tokkoo Ti
Abdii Borii irraa*
ABO Kaayyoo daddaqama hin qabne kan mirga abbaa biyyummaa uummatinni Oromoo humnaan sarbame deebisee, bittaa kolonii halagaa jalaa Oromoo baasuuf qabsoo hadhawaa geggeessaa jiruu dha. Kun ammoo utubaa hin raafmne lafee goototaan kan gad jabaate dhaabate dha.
Nammnni kaayyooo uummata isaatti amanu tokko angoo, dantaa, of tuulmmaa, garee fi gandummaan isa hin booji’u.
Kani inni galii isaa godhatee ka’e kaayyoo fi akeeka Uummta isaaf of keenee galii deemuuf beekuu, rakkoo qabsoo keessatti isa mudatee qabsoodhaan irra aana malee mooraa qabsoo diigee qratti hin fiigu yoo ergaa biraa qabaate malee.
Qabsawaan uummata isaa roorroo jalaa baasuuf waadaa seenee qabsa’uuf hiriire bu’aa fi ba’ii qabsoo keessatti isa mudate qabsoodhaan sirreeffatee ofiif wareegamee uummata isaa roorroo jalaa baasuu dha waan taheef.
Kun ammo kan ilaalu namoota kaayyoo biraa fi ergaa garaa garaa qabaachaa QBO (Qabssoo Bilisummaa Saba Oromoo) keessatti hirmaachaa kaayyoo nyaaphaa jiraachisaa turan miti.
Dubbii kana waanan kaaseefan qaba. Namooti tokko tokko kaayyoo isanii isa dhoksaa himuu dhiisanii badii dalagan golgachuuf hogganatti haqachuu fedhu. Karaa tokko ammo ani duruma iyyuu kaayyoo koo kana ibasachaan ture, ana harkaa fudhachuu didan malee jedhu.Garii ammoo nuti yeroo tokko iyyuu walabummaaf qabsofnee hin beeknu jedhanis mullatanii jiru erga akkas tahee maaf nu keessa turan kan jedhu gaaffii bilbiltuu dha?
Dur yeroo dhaabicha keessatti hoggana waliin turan seera ofii qopheessaa turan keessatti miseensa dhaaba tokkoo tahanii, dhaaba biraa keessatti hirmaachuu fi dhaaba biraa ijaaruun hanga du’aan namaadabsiisutti seera nuuf tumaa turan kun isaan irratti maaf hojii irra ooluu dhabe? Gaaffii Kana utuma isaanumti nuuf deebisanii gaarii ture.
Ethiopian Oromoof halagaa dha. Isaan gosa seem, nuti gosa kuushi kanaaf nuti akkuma biyyoota ollaa biro hiree, aadaa fi dangaa mataa keenyaa qabna
Hariiroon Oromoo fi habashoota gidduu jiru jaarraa tokkoo oliif kan dhiigaan boora’ee dha. Isaan waliin mirga walii kabajinnee waliin jiraachuun kan yaalamee dadhabame tahuun isaa Oromoof haaraa miti. Habaashooti walii isaaniis tahae horma waliin afaan dimokiraasiin waa hiikuuf fedhii hin qaban, aadaa isaniis miti.
Keessaa iyyuu Oromoo waliin ammoo diina tarsiimooti. Isaan Etihopia afaan tokko,alabaa tokko fii amantii tokko malee mirga hiree murteeffannaa oromootti hin amanan. Kanaaf habashooti humna biraan demokratahuu miti isaanumtuu walii isaniif demokratahanii hin beekan.Habshootinni seenaa isanii keessatti afaan qawween aangoo wal jijjiiru malee gaafa isaan tahanii sirna demokratawaan aangoo wal jijjiiran seenaa irraa arginees dubbifneess hin beeknu.
Garuu har’ra gaafa Oromoon osoo ofi akka lammii lammaffaatti ilaalamuu habashoota ganna dhibbaa fi afurtamaa ol dhiiga Oromoo xuuxaa fi harka ittiin dhiqachaa,jiraachaa turan demokiratessina jedhan nama gaddisiisa. Kanaafu kan ani “abidda dura of irraa buusanii booda nama irraa buusu” jedheef.
Qabsoo fedhii Ummata Oromoo milona 40 olii galmaan gahuuf ilmaan Oromoo irratti hiriiranii jiran warra gaafa feene diignee, gaafa feene ammo habashaa harkatti kuffifna jedhanii yaadaniin “yaa gowwa si dubaan bowwaa” jennaan.
Oromoon kan inni milakawe erga habashatti hirkachuu dhiisee of danda’ee qophaatti of ijaaree booda kan inni milkii guddaa argate kanaaf ammas kan inni waan hafe xumuratus yoo of danda’ee socho’e qofa . Walumaa gala sabinni wayyabini saba xiqqaatti hin hirkatu irrraas waa hin eeggatu kanaaf warri sammuu baandaan yaadan nuti maliin namaa gadi maaltu nutti hirrata jedhanii yaadutu irraa eegama .
Mooraa QBO keessa rakkoon ture adda bahaa jira
MQBO keessaatti namootinni harra iyyuu sammuu habashootaan kan yaadan ni jiru. Isaan kun jechi Etihopia jedhamu kun akkuma habashoti jabana Rasuulota ykn Malaykotaa Makkat Al Mukarramaa keessatti irratti salatame Yerusaleem keessatti irratti sagadame jedhan waan diigamu itti hin fakkaatu.
Kana irraan kan ka’e warri sammuu MESON, EPRP, fi IDUn yaadan har’ras dhaaba keessatti Etihopiummaan jirachisuuf miseensotaa fi hawwaasa Oromoo dogoggorsanii afaan faajjessuu yaaluun ‘dhangalaasanii funaanuu’ taha. Jarooti kun Kaleessa dhaabota ani oltti tuqe waliin gaafa qabsoo godha turan sagalee Oromoo iyyuu dhageessisuu dadhabanii dhaabichatti dhufan haa tahu malee harra maaltu tahe” qaaqeen bara mataan ishee mrage mataa kootu bade” jetti jedhan. Isa harra itti nu hawwatan kana dura yaallee dadhabane jechaa turan moo gaafas nu gowwomsu turan? Habasha waliin hiriiranii mirga uummata Oromoo barbaaduuf kan bakka buuteen isaanii dhabame ilmaan Oromoo qaqqaaliin lakoobsa hin qaban .Warri harra habashaatti hirkachuuf nu hafeeran kunuu utuu qophaatti of danda’anii hin qabsoofne tahee lubbuun isaanii yoona hin geessu ture.
Kana malees warra dur gaaf hoggana keessa turan sagantaa siyaasaa, seeraaf heera, dambii adabaa fi kaayyoo naamusaa harra dhaabi keenya ittiin masakamu warra tume keessaa isaan tokko . Garuu harra warra akka fedha isanii diigee ijaaru tahanii argamau“Kormi saree ofumaa seera tumee ofumaa diiga ” jedha Oromoon yeroo makmaaku.Miseensota dura gaafa dhaaba keessa turan badii dalagan jedhanii ofumaaf tarkanfii irratti fudhachaa fi fudhachiisaa turan harra warra mufate , arihame fi abdii kutate jedhanii maqaa mrii fi MQBO tasgabbeessinaa, Ethiopi’ummaa fudhachiisuu yaalaa jiru. Kanas yaalanii abdii haa kutatan jenna.
Miseensotaa fi hawwaasi keenya gariis gaafa namootinni gareens tahu murnaan dhaaba keessaa fincilanii gadi bahan dhaabbadhaa jechuu irra duukaa yaahuun akka isaan badii kan biraa dalagan gochuun kan nama gaddisiisuu dha . Kun ammo yeroo hedduu gandummaa fi gareen wal qooduu irraa mul’lata, aadaa tuffatamaa dhas.Rakkoon yoo jiraate wal baqachuu fi wal facaasuun hin furamu, ni baballata malee.“Diiguun salphaa dha ijaaruutu nama dhiba malee”jedha Oromoon yammuu makmaaku.
Dhaabi oromoof dubbatu baayyachuun qaroomina, dimokrasiin babalachuu dha. Garuu dhaaba tokko keessa bahanii olola wal irratti oofanii wal salphisuu fi iccitii walii bakkeetti facaasuun fafa. Aadaa Oromoos miti.
Murni akkasitti kanserii tahee MQBO quucarsaa ture kun nu keessaa achi bahuun tarkaanfii tokko duratti deemuu keenya mullisa.Kunis salphaatti hin argamne waan taheef kaayyoon dhoksaatti dhumaatii ilmaan Oromoof sababa guddaa tahe kun baga nu irraa calahe jenna.
Rakkoon akkasii kun dhabota biroo kan akka shaabi’aa fi wayyanee keessatti wal rashanuu fi wal mo’uun irra aanama ture .Kun ammoo habashaaf malee Oromoof aadaa miti. kunis qaama jabinaa keenya keessaa tokko jedheen amana .Garuu qabsoo keenya lafa irra harkisuun isaa beekamaa dha “kormi lama dallaa tokko keessatti hin mo’u” jedha Oromoon akkas jechuun kaayyoon lama mooraa ykn jaarmiyaa tokko keessa hin jiraatu jechuu dha.
warri har’ra maqaa wal dhabbiitin mooraa qabsoo caccabsanii dhabamsiisuu yaalan kun akkataa rakkon wolidhabbii hoogganaa gidduu furmaata argatu sirriiti beeku.
Jarri kun kaayyoo isanii dhoksaa har’ra ittiin gadi bahan kana iccitii godhatanii maqaa hoggana wareegama guddaan QBO jiraachisaa turan irratti olola oofuun, uummataa fi miseensota afaan faajjessaa sababa jiraniif badii kanaaf itti gaafatama jalaa hin bahan. Seenaanis isaan hin dhiisu.Sababi isaa lubbuu goototaa fi Uummata Oromootti qoosaa waan jiraniif.
Isaan kun dura gaafa dhaaba keessa turan bu’aan isaan QBOf buusaa tura hangam jedhee namanni yaadu harras gadi bahanii yoo dhaaba ijaarattan maal buusuu danda’u jedhanii asumaan tilmaamuun nama hin rakkisu
Kanas sababan jedheef yoo warri nu hogganaa turan harra gadi bahanii midiyaa habashaa irratti nuti Ethiopiaaf malee walabummaa Oromiyaaf gaaf tokko qabsoofnee hin beeknu jechuu isaanii ti.Kun ammo ilmaan Oromoo QBO ganna 40 oliif deemaa turame keessatti wareegama kaffalame gaafa of duuba galagalee ilaalu deebiin akkamii jara kanaaf akka kennamu ifaa ture.
Qabsawota dhugaan rakkoo uummata Oromoo hiikuuf hiriiran gidduutti dhaltee achuma keessatti hiikama. Yoo dadhabame ammo kora sabaatu hiika ture .yoo sana irra darbe ammo akkuma warra harra ilaa fi ilaameen taa’ee badii jiru hubatee furmaata itti kennuun rakkoo jiru hikkateetti furama ture.
MQBO tasgabbeessuutu ilmaan Oromoo irraa eegama
Isaan hoggana qabsootti cichan balaalefachaa Ethiopia awwaalaa fi mana hidhaa Oromoo taate demokratessuuf afaan faajjii uuman waliin gaaddisa jalatti teenyee wal dhabbii nu gidduu jiru furratnnu dhiphaa natti fakkaata. Oromoon aadaa sirna gadaa kan darbii dabarsaan dhaalle ittiin wal dhabbii furatu qaba. Kun garuu gaaddisa Ethiopianstoota waliin jala tahanii rakkoo furatan miti.
Wal dhabbiin MQBO keessa ture rakkoo kaayyoo ti moo miti?
Namooti tokko tokko rakkoon fi wal dhabbiin MQBO keessa jiru wal dhabbii kaayyoo miti jedhu;akkamitti akka isaan ilaalan garuu namaaf hin galu. Walabummaa bilisummaa fi Ethiopi’ummaan Ibiddaa fi cidii dha.
Oromoon ammo biyya Alaabaa mataa isheetii qabdu walaba taate ijaarrachuu fedha kunii fi Ethiopian ammo waliif diina.
Mee fakkeenya tokkon kaasa dur dhaaba keenya keessatti seerri tumame hundi ni kabajama ni sodaatama ture. Harra garuu kanneen hoggana turan gadi bahanii seera cabsuun kaayyoo isanii dhoksaan nukeessa tahanii dalagaa turan galmaan gahachuuf qabsoo keenyaa fi hoggana keenya irratti ololaa jalaqaban harra garuu kaayyoon ilmaan Oromoo dhiiga isaniin jiraachisaa jiran isaan tufa jira, seenaan haa dubbatuu.
Rakkoo amma nu mudataa jiru kana keessa carraa argatee diinni uummata keenya irratti roorisuun nama Oromummaan itti dhagaa’amu hunda garaa gubaa jira . Kun ammoo irra baratamuu qaba ture. Egaa naminni sirrtiitti kana hubatee ilaalef ifaa dha jedheen yaada.
Hayyuun aadaa sirna gadaa keessaatti maal hojjetee darba?
Aadaa sirna gadaa Oromoo keessati Yubi ykn Hayyuun badii dalaga utoo hin taanee badii irra nama deebisee nama gorsee beekumsa nama dhaalchisa. Kana beekuuf ammo gadaa ofii keessa jiru ilaalee waan umuriin isaa isaaf hayyamu dalaguu qaba; kun hayyoota keenyaaf akka galu abdiin qaba. Aadaan sirna gadaa hojii irra ooluun egeree uummata Oromoof abdachiisaa dha jedheen yaada.
Hayyootin keenya hedduun akka daandii irraa maqanii fi aadaa gadhee nu dhaalchisaa jiran waan xiinxalan natti hin fakkaatu. Hayyuu fi Manguddoon seeraa fi biyya tolchee, sirreessee seenaa bareeda dhaloota boodaaf kaa’ee darba malee gosaa fi saba diigee cacabsee, waa xureessee, balleessee darbuun aadaa Oromoo miti.
Mirgi sabaaf sab Lammootaa durumaa Uummata Oromoo birattis tahahe ABO biratti kabajamaa dha.
Akkuman sila olitti kaase dhaabi Oromoof dubbatu yoo baayyatee qaromina; garuu sabboonummaa habashumma caalaa fudhatanii of irra mirga kan sabaa fi sab lammootaa irra dabrree iyyuu Afirikaa bakka buuna jechuun eessa akka jiran wallaaluu irra natti fakkaata ”Ibidda dura of irra dhaamsanii booda nama biraa irraa dhaamssu” jedha Oromoon yammuu makmaaku.
QBOn akeeka siyaasaa hordofu qaba;akeeki qabsoo kanaas sagantaa siyaasaa ABO irra akkas jedha.Hundeen akeeka qabsoo kanaa Mirga Hiree Murteeffanna Uummata Oromoo guutummaatti fiixa baasuu taha. Kunis kan mirkanaahu murtii bilisa Uummata Oromootin. Mootummaan walabaa Oromiyaan ijaaratuu ykn tokkummaa siyaasaa haarayaa fedhii qixxummaa, kabajaa dantaa gama hundaa fi dimokrasummaa irra hundaawe uummattoota ollaa Oromiyaa fi biroo waliin dhaabbachuu taha .
Galii kana bakkaan gahuuf ammoo Uummatoota, humnoota mirga hiree murteefatnnaa Uummata Oromootti amanan waliin qabsoo qindeeffachuu dha.
Sabaa fi sab- lammooti jedhan kun hedduun isaanii kabajaa Uummatinni Oromoo qabuuf irraanfatanii wayyanee jala bu’anii Oromoo irra lafa qircatanii baballifachaa jiru.
Nuti Oromoon garuu akka wayyaanee sabaa fi sab-lammootatti gargaaraminee mirga saboota biroo dhiibuu osoo hin taane, mirga sabaa fi sab-lammii kabajaa turuu keenyaaf seenaatu ragaa nuuf baha .warri kana bakka buuna mirga isanii falminaaf jedhanis suuta jedhanii yoo deeman gaarii dhan jedha, kun yaada kooti.
ABOn Banii Shanguliin ofii waamee isinis biyya qabduu kotta biyya keessan falamadhaa uummata keessan barsiifadhaa jedhee waamee ijaaree akka isaan mirga isanii falmatan gochuun seenaa ho’aa kaleessaaa ti.
Walumaa gala yaada koo yammuun xumuru nuti ilmaan Oromoo rakkoo keenya waliin teenyee furachuu malee halagaatti harka kennuu fi wal irraa baqachuun furmaata hin fidu. Hogganoota keenya duraanii qabsoo keenyatti dadhabaa turanii amma wal facaasuun bakkee kanaa dhaaba jijijjiiruun ijaaraa olaniin akkuma aadaa keenya kan sirna gadaa umurii fi gadaan ofii keessa jiran ilaaluun osoo deebi’anii waa gaarii hojjetanii seenaa bareedaa kawwatanii darbanii gaarii dha.
Kanaaf fakkeenyi dhaabota amma walitti dhufanii MQBO keessatti nagaa buusaa jiran fakkeenya gaarii dha. Nuti ilmaan Oromoo maqaa Oromoon dhaaba baayyisaa jirru kun yoo hoggana tokko jalatti dhufnee tokko tahuu hanqanne tumsa ijaarranne mooraa keenya gabbisuun mooraa diinaa xiqqeessun bilisummaaf caalaatuu nui qopheessa jedheen yaada .
Rakkoon uummata oromoo kan inni furamu afaan qawwee fi human qofaan akka tahe nama sammuu walabaan yaaduuf ifaa dha, Harra addunyaan kan inni gurra namaa kennu yoo human qabbaatan qofa Oromoon ammas gad deeb’ee mirga isaa diina harkaa dhoortoon eeggachuu hin qabnu
Na ofkalchaa, Galatomaa!
Posted on 11/02/2013, in Uncategorized. Bookmark the permalink.	Leave a comment.